Weerar Gaadiid Lagu Gubay Oo Ka Dhacay Kaabul. – Calamada.com
Weerar Gaadiid Lagu Gubay Oo Ka Dhacay Kaabul.
calamada April 17, 2017 1 min read
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in weerar culus oo khasaara dhaliyay uu ka dhacay qeybo ka mid ah gobalka Kaabul ee dalkaasi.
Weerarkan waxey ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan la beegsadeen kolanyo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka dalka Afghanistan kuwaasi oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobalka Kaabul.
Kolanyada la weeraray oo marayay agagaarka degmada Sarubi ayaa waday sahay ciidan’iyadoona weerarka markii dambe uu isku badalay dagaal qaatay muddo saddex saac oo xiriir ah.
Webseydka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa baahiyay in weerarkaasi lagu gubay afar gaari oo kala ah Labo Booyadod oo Shidaal waday’Ambalaas iyo gaari nooca Booliska ay isticmaalaan ah’waxaa sidoo kale dagaalkaasi lagu dilay Labo askari Saddex kalane waa lagu dhaawacay oo gabi ahaantooda ah askarta maamulka daba dhilifka fadhigiisu yahay magaalada Kaabul.
Dhanka kale qarax ka dhacay qeybo ka mid ah gobalka Baktiya ee dalka Afghanistan waxaa lagu gubay gaari ciidan oo uu lahaa maamulka daba dhilifka dalka Afghanistan Saddex askarina qaraxaasi waa lagu dhaawacay kuwaasi oo lasocday gaariga ay miinada haleeshay.
Howlgaladaan lagu gubay gaadiidka dagaalka noocyadooda kala duwan islamarkaana dhimashada iyo dhaawaca ay ku noqdeen askarta daacada u ah maamulka dowlada Nasaarada Mareykanka ay ka dhisatay dalka Afghanistan ayaa qeyb ka ah Howlgalka Al-cumariyah oo ah howlgal sanad ka hor ay ku dhawaaqday Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 20-07-1438Hijri.
Next: Dhageyso Faahfaahin Laga Helayo Qarax Lagu Dilay Askar Kenyaati Ah.